Ka shaqeynaya Nidaam Xoogan, Cajiib ah oo Cunto leh
Alliance Stewardship Alliance waa urur xubin ka ah oo abuuraya nidaam cunto iyo nidaam beereed kaas oo dhaqaale ahaan wax ku ool ah, bulsho ahaan, iyo deegaan ahaanba la sii wadi karo. Waxay doonayaan in ay dhistaan adduunyo ay ku jiraan xayawaanno loo arko inay yihiin khayraad qaali ah, kuwa soo saara cuntada maxalliga ah waxay kasbadaan caddaalad, mushahar nololeed, waxbarashada xaafaddaha ayaa isku dhafan heerarka waxbarashada oo idil, kaabayaasha ayaa dib loo dhisi doonaa si loo daboolo nidaamka cuntada maxaliga ah, cunto wanaagsanna waa la heli karaa dhammaan dadka.
Illinois Alliance Stewardship Alliance ayaa dhiirrigelisay wakiillada wanaagsan ee dalka Illinois. Andy Shireman iyo aabbihiis Charlie waxay leeyihiin taariikh dheer oo ah inay noqdaan wakiilo wanaagsan. Hawlaha beeraha waxaa ka mid ah xayiraad-ilaa laga beerto, biyaha iyo qashinka lagu xakameeyo tubooyinka, qaababka xasilinta fasalka, biyaha cawska ah, istaraatiijiyada maareynta nafaqada, iyo farsamooyinka taraafikada la xakameeyo. Dhamaan farsamooyinkan waxay ku shaqeeyaan muusikada daboolan. Andy wuxuu ka shaqeynayaa in uu kordho xaddiga xayawaanka bakeeriga ah ee xayawaanka beerkiisa isagoo beeraya 3,500 hektar oo dalagyo daboolan.
"Nidaamkaygu waa inuu xoqdo illaa iyo uu daboolo dalagyada, waxaan go'aansaday in aan dib u dhisno wixii aan ka soo bixinay dhulkaas," ayaa yiri Andy. "Dib-u-dhiska maaddada beeraha ee lumay waxa ay kordhin doontaa wax-soo-saarka iyo faa'iidada."
Ilaa hadda, kooxda Andy iyo Illinois Associate Associate Conservation Associate, Woody Woodruff, waxay soo bandhigeen in ka badan 15 shirwayn, siminaaro, iyo maalmaha goobaha, iyaga oo gaaraya in ka badan 500 beeralay.
Khibradda kala duwan ee Woody iyo asaasiga waxbarashada ee beeraha waari kara waxay siiyeen aqoon iyo xirfado badan oo la xiriira caafimaadka carrada iyo biyaha.
"Dhamaan taariikhda shaqadayda iyo waxbarashadayda waxaan si joogta ah u soo gaadhay dhibaatooyinka iyo xalalka beeraha qarniga 21aad, aniguna waxaan naftayda isku dayey inaan soo bandhigo waxqabadyo cusub oo aan isku dayo hawlaha beeraha. Aniga ahaan, wakiil wanaagsan oo dalka ka mid ah waa sida muusikada wanaagsan. Waxaad gaari kartaa hadaf shakhsi ah si aad u barato muusikada adoo adeegsanaya dhaqanka. Ku qanacsanaanta had iyo jeer way ku yar tahay inaad ogtahay inaad ka wanaagsanaan karto, "Woody ayaa sidaas yidhi.